Ernest Bevin ၏သူငယ်ချင်းများ – Ernest Bevin ကောလိပ်
အပြုံးအမေဇုံ - Raise money every time you shop
Other Ways you can help - ပွဲစဉ်ရန်ပုံငွေရှာခြင်း
ကောလိပ်အတွက်အပိုငွေရှာဖွေနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာပွဲရန်ပုံငွေဖြစ်သည်. တိုးပွားလာသောကုမ္ပဏီအရေအတွက်သည်ပွဲစားရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကိုလည်ပတ်ကြသည်. FEBS သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ပါ ၀ င်မှုမှကျွန်ုပ်တို့အကျိုးရနိုင်ပါသည်, သို့သော်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့, မည်သည့်ရန်ပုံငွေရှာကျောင်းကအဖြစ်အပျက်မှာ. သင့်ရဲ့ပါဝင်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဥပမာ, တစ်တင်းကုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲတစ်ခုသို့မဟုတ် Raffles နှင့်အတူကူညီခြင်း. နှစ် ဦး စလုံးရန်ပုံငွေရှာနှင့်အတူကူညီအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီ. အကယ်၍ သင်၏အလုပ်ရှင်ကပွဲရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုသင်ထင်လျှင်, သငျတို့သကျေးဇူးပြုပြီးအဆက်အသွယ်ပါဝင်ပတ်သက်ရချင်ပါတယ် febssw17@gmail.com ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာဖို့ဘယ်လိုနားလည်နိုငျကွောငျး.
FEBS မှတ်ပုံတင်ဒါနအရေအတွက်: 800439
Ernest Bevin ၏သူငယ်ချင်းများ (FEBS) မှာ set up ခဲ့သည့်တစ်ဦးကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် 1988 ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါဒေသခံပညာရေးအာဏာပိုင်များကထောက်ပံ့ပေးမပေးပညာရေးအတွက်အဆောက်အဦ၏ပြဌာန်းချက်အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အကူအညီပေးခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းကျောင်းသားများ၏ပညာရေးတိုးတက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ.
ထဲမှာ 2019-2020 ပညာသင်နှစ်မိဘမြားနှငျ့ဝနျထမျးမြား၏အုပ်စုတစုမိသားစုများအတွက်တစ်ဦးကြိုဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် FEBS သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့, ဝန်ထမ်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးအများကြီးလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုအဘို့အ Ernest Bevin ကောလိပ်နှင့်ရန်ပုံငွေမှထောက်ခံသူများ (စာကြည့်တိုက်စာအုပ်ဥပမာ, ကွန်ပြူတာများ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့ကို).
ကောလိပ်ကျောင်းကဘတ်ဂျက်အပေါ်ရန်ပုံငွေစိန်ခေါ်မှုများနှင့်တစ်ဦးတိုးပွားလာညှစ်ရင်ဆိုင်နေရအဖြစ်, FEBS ၏အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သန့်စင်ခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အလစာတိုးပိုက်ဆံရန်ဖြစ်ပါသည်. ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်စာသင်ခန်းပြင်ပ၌ကျယ်ပြန့်။ မျှတသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်.
အခွင့်အရေးအားလုံးကို Ernest Bevin ကောလိပ်မှထိန်းသိမ်းသည် 2021
The Year7မိဘများ’ Evening is taking place on May 12th.
ခုနှစ်7& 12: Term starts Friday 3rd September at 8.40am
ခုနှစ် 8 ရန် 13: Term starts Monday 6ကြိမ်မြောက် September at 8.40am
More information click ဒီမှာ
Lateral flow testing before school starts – click ဒီမှာ
Sixth form enrolment for external students continues on Friday 3rd September form 10am. Level2courses are full. ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ for more information.
စာရင်းသွင်း - September 2021
Congratulations to all of our students and their exam success. ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ